Peps coir marsical na ọnụ ahịa ahịa | Rayson
Mgbe ọtụtụ afọ nke siri ike na ngwa ngwa, Rayson etoola n'otu n'ime ndị ọrụ kachasị aka na ndị ọrụ na China. Peps coor na-etinye ego na mmepe ngwaahịa na ndozi ọrụ dị mma, anyị ebilitela aha dị elu na ahịa. Anyị na-ekwe nkwa inye onye ahịa ọ bụla ndị ahịa n'ụwa niile na ọrụ ọrụ aka na-ekpuchi ihe ndị ahịa, ahịa na ọrụ ahịa. N'agbanyeghị ebe ị nọ ma ọ bụ azụmahịa ị na-etinye aka, anyị ga-enwe mmasị inyere gị aka imeri okwu ọ bụla. Ọ bụrụ na ịchọrọ ịmata nkọwa ndị ọzọ gbasara ngwaahịa ọhụrụ anyị ma ọ bụ ụlọ ọrụ anyị, na-enweghị enyemaka, na ume, na-enye ndị mmadụ nkasi obi zuru ezu kwa ụbọchị ma ọ bụ n'abalị, ọkachasị maka ndị nwere allergies akpụkpọ.